जसलाई भनिन्छ रूखा र छुच्चा- मनोरञ्जन - कान्तिपुर समाचार
जसलाई भनिन्छ रूखा र छुच्चा
काठमाडौं — सबैभन्दा रुखो, अभ्रद, घमण्डी वा छुच्चो सेलिब्रिटी को होला ? यसको जवाफ सहज छैन । तर, अमेरिकी प्रश्नोत्तर साइट, कोरा डटकमका प्रयोगकर्ताले रुखा सेलिब्रिटीबारे एउटा थ्रेड तयार पारेका छन् ।
त्यसमा बलिउड कलाकारहरू कट्रिना कैफ, टींकल खन्ना, अनुष्का शर्मा, बबी देओल, सलमान खान, गोविन्दा र सैफ अली–करिना कपुर खानलाई अचाक्ली रुखा स्टारका रूपमा समेटिएको छ ।
फेमटेन डटकमका अनुसार कान्य वेस्ट, ग्वनेथ पाल्ट्रो, क्रिस ब्राउन, एलेक बल्डविन, क्रिस्टिना एगुलेरा, लिन्डसे लोहान, ब्रुस विलिस, साया लबफ, क्याथरिन हाइगल र क्रिस्टिन स्टेवार्ट रुखा सेलिब्रिटी हुन् । पत्रकार र फयानसँगको व्यवहारका आधारमा उनीहरूको रुखोपन नापिएको उक्त वेबसाइटले जनाएका छन् ।
‘सेलिब्रिटीहरू सँधै स्पटलाइटमा हुन्छन्,’ फेमटेनले लेखेको छ, ‘उनीहरू रिसाएको, खुसाएको सबै थोक समाचार बन्छ । आफ्नो इमोसन हयान्डल गर्न नजान्ने सेलिब्रिटी बदनाम हुन सक्छ ।’
सन् २००८ मा सन्तोष राई नाम गरेका फयानलाई झापड हानेको प्रसंगलाई लिएर कोरा प्रयोगकर्ताले गोविन्दालाई अभद्रको संज्ञा दिएका छन् । फिल्म ‘मनी है तो हनी है’ को छायांकनका क्रममा गोविन्दाले सन्तोषको गाला चडकाएका थिए । त्यसको एक वर्षपछि सन्तोषले बम्बे हाइकोर्टमा गोविन्दाविरुद्ध मुद्दासमेत हाले । उक्त केस सुप्रिम कोर्टसम्म पुग्यो । अन्तत: गोविन्दाले ५ लाख भारु दिएर क्षमायाचना गरेपछि सन्तोष साम्य भएका थिए ।
टींकलबारे चाहिँ एक अज्ञात प्रयोगकर्ताले आफ्नो अनुभव सेयर गरेका छन् । उनी लेख्छन्, “म त्यो बेला खेलौना स्टोरमा काम गर्थें । एउटा बच्चा आएर हाम्रो स्टोरबाट सानो खेलौना लग्यो । मैले केही भनिनँ । केही छिनपछि ऊ आफ्नी आमालाई लिएर आयो । आमा टींकन खन्ना थिइन् । उनले मलाई नराम्रोसँग झपारिन् । ‘बच्चालाई खेलौना दिने हो ?’ भनेर कराउँदासम्म ठीकै थियो । खेलौनाको मूल्य सोधेपछिको उनको प्रतिक्रियाचाहिँ अनौठो लाग्यो । उनले बच्चालाई ‘२८० रुपैयाँ कमाउन कति गाह्रो छ, तँलाई थाहा छ ?’ भन्दै थर्काएको देखेर म छक्क परेँ । कस्ती रुखी महिला होला ?”
गायिका रिहानामाथि दुव्र्यवहार गरेको, नशामा चूर भएर तोडफोड गरेको जस्ता थुप्रै उपद्रो देखाएका अमेरिकी गायक क्रिस ब्राउनलाई पनि फेमटेनले रुखो भनेको छ । र्‍यापर कान्य वेस्टमाथि पनि उस्तै गुनासा गरिएका छन् । आफूले आफैंलाई महान् भन्ने उनको बानीको पनि वेबसाइटमा खिल्ली उडाइएको छ । ‘संगीत क्षेत्रको नम्बर वान मान्छे मै हुँ,’ कान्य भन्छन्, ‘अरू सबै दोस्रो नम्बरमा पर्छन् ।’
अमेरिकी र्‍यापर निकी मिनाजलाई चाहिँ छुच्ची सेलिब्रिटी भनिँदो रहेछ । उनी विशेषत: मिडियासँग असहज रूपमा प्रस्तुत हुन्छिन् । केसम्म गर्छिन् भने, पत्रकारको प्रश्न चित्त नबुझे उनी लाइभ सोको बीचमै उठेर हिँडिदिन्छिन् । उनको आफ्नै ‘टु क्वेस्चन रुल’ पनि छ । दुईभन्दा बढी प्रश्न गरे उनी जुरुक्क उठेर बाटो लाग्छिन् । उनको पारा रुखो भएको पत्रकारहरूले बताउँदै आएका छन् ।
प्रकाशित : भाद्र २७, २०७४ ०९:०३
काठमाडौं — समाजसेवी चीजकुमार श्रेष्ठको संस्मरण पाठकमाझ आएको छ । बन्दीपुरको विकासमा उल्लेख्य योगदान दिएका श्रेष्ठको ‘घुमीफिरी बन्दीपुर’ राजधानीमा साहित्यकार खगेन्द्र संग्रौला, कवि द्वारिका श्रेष्ठ, डा. मदन पियालगायतले सार्वजनिक गरे ।
‘उहाँले बन्दीपुरको विकासमा जसरी सहयोग गर्नुभएको छ, त्यो अतुलनीय छ,’ चीजकुमार श्रेष्ठका विद्यार्थीसमेत रहेका डा. पियाले भने, ‘यो पुस्तक उहाँले रुचिकर शैलीमा लेख्नुभएको रहेछ । पढेर म विगतमा फर्किएँ ।’
बन्दीपुरकै भानु माविमा लामो समय प्रधानाध्यापकसमेत रहेका चीजकुमार श्रेष्ठले बन्दीपुर विकास कोषको अध्यक्षता पनि गरेका थिए । कार्यक्रममा संग्रौलाले त्यो सन्दर्भ कोट्टयाउँदै बन्दीपुर र श्रेष्ठको पुस्तकको प्रशंसा गरे । कुनै समय बन्दीपुरमै शिक्षकका रूपमा कार्यरत रहेका संग्रौलाले भने, ‘चीजकुमार आफ्ना सबै पत्र, जीवनका रंगसहित आउनुभएको छ । उहाँले आफूबारेभन्दा आफूले बाँचेको परिवेशबारे इमानदारीपूर्वक उल्लेख गरेर यो पुस्तकलाई उत्कृष्ट बनाउनुभएको छ । बन्दीपुरको विकासमा लामो समय योगदान गरेका व्यक्तिको यो पुस्तकले संस्मरण कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सन्देश पनि दिन्छ ।’
कवि द्वारिका श्रेष्ठले पनि चीजकुमारको पुस्तक पढ्नैपर्ने भएको टिप्पणी गरे । ‘संघर्ष गरेर एउटा मानिसले केसम्म गर्न सक्छ भन्ने यसमा लेखिएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘यो पुस्तक अति मीठो भाषामा लेखिएको छ । कुनै समय वैरागलाग्दो भएको बन्दीपुरको पुनर्जागरणमा चीजकुमारले ठूलो योगदान दिनुभएको छ । त्यसका लागि उहाँले गरेका इमानदार प्रयासको फेहरिस्त यो पुस्तकमा पाउन सकिन्छ ।’
चीजकुमारले पहिले पुस्तक लेख्ने सोच नभए पनि लेखिसक्दा आफू हल्का भएको बताए ।
उक्त पुस्तक फिनिक्स बुक्सले बजारमा ल्याएको हो ।